Amoron’i Mania : Dokotera Raketamalazamananirina Yannette Christiana, no voatendry ho talem-paritry ny fahasalamana vaovao - Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2019 → mai → 24 → Amoron’i Mania : Dokotera Raketamalazamananirina Yannette Christiana, no voatendry ho talem-paritry ny fahasalamana vaovao
Amoron’i Mania : Dokotera Raketamalazamananirina Yannette Christiana, no voatendry ho talem-paritry ny fahasalamana vaovao
Redaction Midi Madagasikara 24 mai 2019 0 Comment
Tafapetraka eo amin’ny toerana maha talem-paritry ny fahasalamana eto Amoron’i Mania, ny Dokotera Raketamalazamananirina Yannette Christiana. Izany dia taorian’ny famindram-pahefana natao herinandro vitsy lasa izay.
Fantatra nandritra ny resaka nifanaovanay tamin’ny talem-paritra vaovaon’ny fahasalamana, fa ny ady amin’ny kolikoly sy ny aretina mifindra no laharam-pahamehana apetraky ny Dokotera Raketamalazamananirina, ary koa ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana eo anivon’ny seha-pahasalamana rehetre misy eto Amoron’i Mania. Nosoritan’ny talem-paritra, fa efa voafehy ankehitriny ny firongatry ny aretina kitrotro sy pesta ; izay nampalaza ratsy ny faritra Amoron’i Mania. Tsy afaka nanome tarehimarika mazava ity tomponandraikitra ity, noho ny baiko avy amin’ny minisitera foibe. Araha- maso ihany koa, ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny hopitaly sy ireo tobim-pahasalamana rehetra misy eo amin’ireo distrika, mba hiverenan’ ny fahatokian’ny vahoaka ka hanatona ny tobim-pahasalamana.
Mikasika ny aretina fikorontanan-tsaina izay tsapa fa mirongatra tokoa ny eto Amoron’i Mania, dia nosoritan’ny Doketera R. Yanette Christiana, fa efa misy ny sampandrahara manokana mikarakara ny aretina momba ny fikorontanan-tsaina eto amin’ny hopitaly-be Ambositra, ka entanina ireo fianakaviana manana olana momba izany, hanatona ny CHRR- Ambositra ao amin’ny “Centre de Prevention et Diagnostic de Santé Mentale” na ny “CPDSM”.
Ady amin’ny tsy fanjariantsakafo, nohamafisina ny fepetra eny ifotony amin’ny fametrahana paikady amin’ ny isam-baratonga, toy ny fanofanana ireo tomponandraikitra ara-pahasalamana alohan’ny hidirana amin’ny tena zava-dehibe.
Mikasika ny “fonds d’équité” na tahiry natokana ho an’izay olona sahirana momba ny fitsaboana, dia nosoritan’ny talem-paritra, fa efa mandeha ny fisoratana anarana eo anivon’ny kaominina 61 misy eto amin’ny Faritra. Entanina arak’izany ny olona sahirana mba hanatona ny kaominina misy azy.
Eto am-pamaranana, dia nosoritan’ny talem-paritra, fa hamafisina ny fiaraha-miasa eo amin’ny mpanao gazety sy ny sehatra ara-pahasalamana.